Ikhaya leLanga neNyanga, ikhaya losapho olunye, izilwanyana zasekhaya zingahlala
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguFaifai
Zicocwe ngokutsho Airbnb covid-19 izikhokelo zokucoca. Geqe w / izinto eziluncedo ezinkulu imizuzu edolophu, indawo engundoqo shopping & isithuba aluhlaza kwisixeko. Umgama Ukuhamba evela kwiivenkile zasekuhlaleni kunye zokutyela. Pet-friendly (2 izilwanyana ubuninzi). Clean kunye nokubulala iintsholongwane ngokwezikhokelo ze-airbnb ezichasene ne-Covid 19. Indlu evalelweyo, amagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela eli-1. Indawo ezolileyo. Kufuphi kwiivenkile zesebe kunye neRajabhat. Gqibezela ngezinto eziluncedo kunye nezilwanyana zasekhaya zivumelekile (ubuninzi bezilwanyana ezi-2).
Le ndlu inamagumbi okulala ama-2, igumbi lokuhlambela eli-1, iibhedi ezi-2 5ft kunye neebhedi ezingama-bunk. Abona bantu baninzi bahlala abantu aba-6. Abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-10 bahlala simahla (akukho bhedi yongeziweyo) Ikhitshi lingasetyenziselwa ukupheka. Sinezixhobo zokupheka, iipleyiti, izitya kunye nekhitshi esiza kuzisebenzisa. (Iindwendwe kufuneka zicoce emva kokusetyenziswa.) Amanzi okusela kunye namashwamshwam anikezelwa simahla.
Igumbi lethu lokulala eli-2 igumbi lokuhlambela eli-1 lingahlala abantu abayi-6. Sineebhedi ezi-queen ezi-2 kunye nebhedi enkulu. Abantwana abangaphantsi kwe-10 bangahlala simahla besebenzisa iibhedi ezikhoyo. Iindwendwe zingasebenzisa ikhitshi lethu eligcweleyo ukupheka. Sibonelela ngamanzi okusela simahla, iziqhamo, kunye namashwamshwam.
Ikhaya lethu likwindawo ezolileyo yasePhitsanulok. Imalunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka kumbindi wesixeko. IYunivesithi yaseRatchabhat Piboonsongkram eyona ndawo iluhlaza esixekweni kukuhamba nje imizuzu embalwa. Kukho ipaki enkulu, ichibi, indawo yokwenza umthambo kunye nedama lokuqubha elisetyenziswa luluntu. Kukho iitoni zeendawo zokutyela zasekhaya kunye nezitshiphu ezikufutshane.
Umbuki zindwendwe ngu- Faifai
Umnini uhlala kwindawo enye kwaye usoloko ekhona ukuze amncede.